Rabhoritari ine module nyowani, usaite chikonzero chekutya akawanda bvunzo chubhu kana mapipeti | Xipingzhe
Chinhu chinowanikwa kwese murabhoritari ndeyezvombo zvakasiyana zvekuyedza. Mabhodhoro uye magaba, akasiyana maratidziro, uye mashandisirwo akasiyana anowanzoita ekuchenesa vashandi pakurasikirwa. Kunyanya kuchenesa kwepipettes uye kuyedza machubhu mugiraziware kunogaro ita kuti vanhu vachenjerere. Sezvo marabhoritari mazhinji achiri kuvimba nekuchenesa kwemanyorerwo egiraziware, pane zvinowanzoitika zvikanganiso kana kuita kwakaderera mune izvi
XPZ kambani yava kuvhura mabhasikiti maviri matsva ekutsvaira pipette uye tube batch yekuchenesa, yakawanda-yakatsanangurwa kuchenesa, tichivimba kuti kuburikidza nemabhasikiti maviri aya anogona kubatsira ma laboratories mazhinji kuchenesa ngarava dzekuyedza zvinobudirira, uye imwe nguva inogona kuchenesa magirazi akawanda.
Zvinonyatso kuzivikanwa kuti nzvimbo zhinji dzemarabhoritari dzakaomarara zvakanyanya - dzakamanikana kana kupindirana Izvi zvinopa kumanikidza kusiri madikanwa kune vashandi vema laboratori. Kunyanya yakafanana nepipette uye bvunzo chubhu yakadaro magirazi magirazi haangori asina kusimba chete asiwo anoshandiswa kazhinji kazhinji Izvi zvinoreva kuti vanofanirwa kuchengetwa uye kutamiswa nechengetedzo.
Uye zvakare, nekuda kwehuwandu hwenzvimbo dzakadaro dzegirazi dzinowanzo kuve dzakakura, pamberi uye shure kwekutakura kwavo kuenda kune glasware washer yekuchenesa, vashandi vane hanya vanofanirwa kutarisisa kugona uye nyaya dzehutsanana. Asi izvi zviviri zvinodiwa zvinowanzo gadzira zvinopesana uye zvinonetsa kugadzirisa.
Pano, ngatitarisei kuti XPZ kambani inoshandisa sei mabhasiketi avo matsva vanogona kuva nayo munzira mbiri.
Item 1: Tswanda yejekiseni pipette module
Iyi FA-Z11 ine hurefu hwese hwe337MM, hupamhi hwe528MM, uye dhayamita kureba kwe558MM. Iyo base inogadzirirwa ne roller, iri nyore pakusunda-kudhonza uye kutakura kubva kugiraziware washer.
Kazhinji, iro giraziware girazi rakagadzirirwa murabhoritari kuchenesa zvakapetwa kaviri, uye kukwirira kwepipette kunogona kucheneswa mukati me 46CM. Parizvino, pane nzira mbiri dzekuchenesa mapipetti ayo ari pamusoro kupfuura 46CM. Nzira yekutanga ndeyekutenga matatu-masara Flash modhi. XPZ kambani yakagadzira zvigadzirwa zvakanaka zvine kuyedza kukuru uye ramba uchigadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi. Ikozvino, iyi pombi yekuchenesa bhasiketi inogona kugadzirisa dambudziko rekuchenesa pipette yematanho epamusoro evashandisi - mitsara mitatu yechimiro inoshandiswa kuisa mapaipi ezvinyorwa zvakasiyana, iyo pombi uye inlet yemvura inoumba hukama hwepedyo panguva yekuchenesa. row ndeye 550MM, iyo inogona kushandiswa kuisa mapaipi gumi e10-100ml kududzirwa; Iyo yakanyanya nzvimbo kureba kweyechipiri mutsara ndeye 500MM, iyo inogona kushandiswa kubata 14 mapipettes e10-25ml kududzirwa. iri 440MM, iyo inogona kushandiswa kubata 14 1-10ml pipette. Mune mamwe mazwi, tswanda yeiyo jekiseni pipette module inogona kunyatso shandiswa kune yakapetwa-rukoko yekuchenesa bhodhoro washer uye yakavakirwa-mukati giraziware washer. Iyo ndiyo chaiyo sarudza pipette ine yakanyanya kutaurwa yekuchenesa zvinodiwa nevashandisi.
Chinhu chechipiri: Quarter basket
Kwayedza chubhu, centrifuge chubhu, colorimetric chubhu, centrifuge chubhu inowanzo shandiswa mune zvekurapa nemakemikari, kuyera uye kuyedza masangano.
Murabhoritari, iyo bvunzo chubhu inogona kushandiswa kune diki reagent reaction mudziyo, yekuchenesa kuchenesa kazhinji inoda kushandisa iyo bvunzo chubhu bhurashi kuti uwane chiyero chiyero; Kana centrifuge chubhu ichicheneswa nemaoko, bhurasho rinofanira kushandiswa kubvisa tsvina uye guruva , wozogeza nemvura yakachena. Colourimetric chubhu inoshandiswa kuyera kuunganidzwa kwemhinduro uye nekucherechedza musiyano wevaravara nekusiyana. Teerera kuti usaparadze madziro epombi panguva yekuchenesa, izvo zvinokanganisa kutumira kwayo.
Ndinogeza sei machubhu aya muhuwandu hwakawanda? Hapana dambudziko!
Chigadzirwa chinotsanangurwa pano ndeche quarter quarter (T-401/402/403/404), yakanyatsogadzirirwa mamiriro akadaro. Hurefu hwayo hwese ndeye 218MM yakafara, dhayamita ndeye 218MM., Kureba i100 / 127/187 / 230mm ina marudzi ekukwirira, inogona kugadzirisa akasiyana epamusoro uye akaderera machubhu.Bhasiketi rimwe chete rinogona kubata machubhu mazana maviri kuti agadziriswe kamwechete. Makapu mana emabhasiketi emhando dzakasiyana, akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe, anogona kushandiswa pakuchenesa ngarava dzenzvimbo dzakasiyana; Yese kota tswanda yakaiswa chivharo (kudzivirira mvura yakasimba kubva mukumhanya kubuda mumudziyo panguva yekuchenesa), izvo zvinokanganisa mhedzisiro yekuchenesa. Panguva imwecheteyo, kune zvakare nzvimbo dzakasiyana mukati mayo dzinogona kushandiswa pakuchenesa machubhu akasiyana.
Iwo marondedzero parameter ehurefu hwese dengu anotevera:
Hafu yekutanga tswanda ndeye 100MM kukwirira, 218MM yakafara, uye 218MM dhayamita. Iyo yepamusoro test tube saizi yakaiswa ndeye 12 * 75MM;
Yechipiri hafu tswanda ndeye 127MM kukwirira, 218MM yakafara, uye 218MM dhayamita. Iko kunonyanyisa bvunzo chubhu saizi ndeye 12 * 105MM;
Hafu yechitatu tswanda ndeye 187MM kukwirira, 218MM yakafara, uye 218MM dhayamita. Iyo yepamusoro test tube saizi ndeye 12 * 165MM;
Yechina hafu tswanda ndeye 230MM kukwirira, 218MM yakafara, uye 218MM dhayamita. Iko kunonyanyisa bvunzo chubhu saizi ndeye 12 * 200MM.
Fungidzira kuti rabhoritari ine iyo yekuita basa rekubatsira rekuwacha bvunzo machubhu, zviri pachena kuti ichawedzera kushanda uye kuve nyore. Nekuti yega kota tswanda inokwanisa kuchenesa midziyo zana ne160; nepo yedu Aurora nhevedzano ichigona kuisa 8 akadaro makatengu emabhasikiti mune imwe nguva, uye yedu Rising dzakateedzana inogona kubata makota gumi nemaviri mabhasikiti munguva imwechete.
Aya mabhasiketi maviri ari pamusoro apa akagadzirwa nenzira itsva neHangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co., Ltd. Aya mabhasikiti maviri anonyanya kugadzirwa nesimbi yepamusoro-soro 316L simbi isina simbi. Izvo hazvisi-zvine chepfu uye zvisina hunhu, zvinoshingirira kune yakanyanya tembiricha, ngura, uye slime muforoma, uye inogona kumira kwenguva refu kufamba. Kubata, kupisa kwekushisa disinfection, kumanikidza kumanikidza uye kumwe kuita. Kana rabhoritari yako ichida kuchengetedza nguva, basa, nzvimbo, mvura, magetsi, uye kuchengetedza kuchengetedzwa kwevanoshanda, saka usazvipotsa!
Post nguva: Aug-06-2020